ကနေဒါ CPIဒေတာနှင့် လက်လီအရောင်းဒေတာများ
ကနေဒါ CPI ဒေတာကို အောက်တိုဘာ ၂၀ရက် ၁၅:၃၀ MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်.
မကြာသေးမီကထွက်ရှိခဲ့သည့် ကနေဒါစီးပွားရေးဒေတာများမှာ ကောင်းမွန်တိုးတက်ခဲ့ပါသည်. ဓာတ်ငွေ့များ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများနှင့် လေကြောင်းလိုင်းများတွင် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသောကြောင့် နှစ်စဉ် ငွေဖောင်းပွမှုများမြင့်တက်လာနေပါသည်. CPIဒေတာမှာလည်း ယခင် ၁. ၂%သာရှိခဲ့ရာမှ ဇူလိုင်လတွင် ၁. ၄%အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်. ပြည်တွင်းလက်လီအရောင်းအားများမှာလည်း ကားသစ်များ, အစားအသောက်နှင့် အရက်များကိုဝယ်ယူမှုများပြားလာသောကြောင့် ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းထားသည့်ပမာဏထက် အရောင်းအားများ မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်.
ကနေဒါစီးပွားရေးဒေတာများ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် အားကောင်းတာပြဦးမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ့်အချိန်ပါ. ဒေတာအားကောင်းလေလေ CADတန်ဖိုးမြင့်တက်လေလေဖြစ်နိုင်ပါသည်.